1 Ịhọrọ ngalaba aha, web domaćin, na onye na-ewu ụlọ
2 On-hosted vs. WordPress.com
3 Kasm mma WordPress nema bloga gburugburu na dodatke
4.3 2. Hrana Blog Okwu
6.1 Nzọụkwụ # 1: Chee atụmatụ blog / web stranica
6.2 Nzọụkwụ # 3: Mepụta ịdịnaya (na-elekwasị anya na vizualima)
WP gburugburu (ụgwọ) – Esi nri, Blog s hranom, Yum
WP ngwa mgbakwunye – Ntuziaka kacha mma WP, Simmer, cikorija, esie
Obi dịkwa m ụtọ na ị na-ewere nzọụkwụ mbụ gị taa. Da, ka anyị bido.
Ịhọrọ ngalaba aha, web domaćin, na onye na-ewu ụlọ
Iji malite blog nri gị, ihe atọ mbụ ị ga-achọ bụ:
Ọtụtụ mmadụ na-akparị maka iji ‘isi okwu’ na ngalaba aha samo na Google gosipụtara ya n’elu maka mgbe ndị ọrụ chọwara okwu ndị ahụ.
Otú ọ dị, ọnụnọ nke isiokwu ahụ na ngalaba aha agaghịzi emetụta algoritam motora motora.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ imepe blog banyere nri paleo, ịgaghị akpọ blog gị paleofood.com. Kako koristiti agaghị enye gị ihe ọ bụla SEO brownie.
N’ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe nkwụghachi dị elu n’ikpeazụ n’ihi na mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị ga-aghọ onye ama ama gị na ama. Moglo bi se dogoditi da postanu bụrụ onye impencer.
Otu nnukwu ihe atụ nke ụdị aka ahụ bụ nkwado ndị ahịa, Mkpụrụ Egwu. O nwere ike na-akpọ ya blog, "customersupportadvice.com".
Mgbe ị họọrọ ngalaba aha, ị nwere ike iji ngalaba aha na-edeba aha ọrụ dị ka Namecheap ede ya. Ma ọ bụ, ị nwekwara ike ịzụta ya site n’aka ndị na-eweta gị ma ọ bụrụ na ha enye otu. (Ọtụtụ n’ime ha na-enyefe onwe ha n’efu na atụmatụ kwa afọ.)
Ozugbo we nweta aha ngalaba ahụ, ịkwesịrị chọta onye anabatara WordPress ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị ndụ.
Nađite web mjesto na web mjestu ,họrọ na web lokaciji, a nakon što je riječ o WordPress-u ili na WordPress-u. Ihe dị iche n’etiti akaụntụ nnabata WordPress nkịtị na akaụntụ Bochum jisiri ike bụ na n’ikpeazụ, ndị na-eweta ndị ọbịa na-elekọta nchekwa saịtị gị ma na-eme ka saịtị gịịịịịịịịịịịịị.
SiteGround – Više informacija o mrežnim mrežama.
Enwe Mmasị – Ezigbo web domaćin, ulo nke BuildThis.io.
Ndị na-edebe weebụ nwere ike ịdị ọnụ ala dịka $ 3,99 / ọnwa na ọnụ ahịa dị ka $ 29 / ọnwa. Enwere onwe gị malite na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere atụmatụ ntinye na ntinye ma mechaa kwụọ ụgwọ ka okporo ụzọ gị na-eto.
R amaba ama: Nhazi ụlọ ọrụ nke oge a (ntụgharị, Wix Anka Nrụpụta Ihe Wix) ngalaba nchịkọta na nchịkwa n’elu ikpo okwu ọnụ.
Nemate nikakve vrijednosti, bilo što na WordPress CMS.
On-hosted vs. WordPress.com
Zọ kachasị mfe iji ghọta ọdịiche dị n’etiti a prepušten hostel na WordPress.com akaụntụ bụ ile anya na URL gị ga-ele anya na nke ọ bụla.
Nke mbu bu webusaiti ewerela ya na WordPress.com. O doro anya, ejiri akara mara WordPress niile.
I nke abuo – yourfoodblog.com – ne možete koristiti web stranicu da bismo je vidjeli, a vi više nismo htjeli koristiti..
Weebụsaịtị a-akwadota na mkpokọta WordPress.com bụ nke gị ma ọ bụrụ:
Ị bụ ONYE onye na-elekọta blogerica
ON GAGH do achọ… ma ọ bụ na ị maghị banyere ịmebi ịntanetị
Nemojte chọghị ịma banyere njihra nke gị
Niste više obi uto na nhọrọ mmachi dị iche iche dịka enweghị nkwado maka dodaci na ndị ọzọ
Nemojte više razmišljati o saịtị gị (ọbụlagodi ọ bụghị ruo mgbe ị ghọrọ weebụsaịtị okporo ụzọ dị elu)
Bụrụ na nke ahụ abụghị, gaa maka websaịtị WordPress kwadoro. Ime nke a ga – enyere gị aka irite uru nke ọtụtụ puku isiokwu WordPress na dodatke
Dịla ugbu a ịmalite ịmalite blog gị. Maka nke a, ị ga-achọ isiokwu na dodacima ole na ole.
Kasm mma WordPress nema bloga gburugburu na dodatke
Ebe ọ bụ na ị na-amalit na blọọgụ gị, yana maka na ọ ga-adị oge tupu ọ malite iwere gị ego, ọ dị mma ịmalite iji isiokwu n’efu.
Besplatan WordPress nije dostupan i web mjesto je na:
Kouki bụ maka gị ma ọ bụrụ na ị hụrụ ebe ọcha n’anya ma chọọ ntinye zen na ntakịrị. Kouki na-eji nnukwu font na-egosipụta ihe ngosi dị nnọọ mma. Club ya na otu n’ime ntinye ihe ntanetị ndị a na-emepụta (a tụrụ aro n’okpuru ebe a),-ga-adịkwa njikere iji ndụ gị na-ebi ndụ.
Ngosi & nkọwa / Ọnụ: 129 USD
Cook’d Pro b isiokwu nri WordPress mara mma nke dị oke egwu na ngwaọrụ niile. Dịka ị pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo dị n’elu,-na-elekwasị anya na foto.
Ọzọkwa, na-ewu ya na ntọala Jenesis, nke a maara na ọ na-agba ọsọ na ọkụ. Ihe mkpuchi nke usoro a na-abịa na ngalaba dị iche iche maka ntọala SEO yana maka ntọala ndị ọzọ.
Rịba ama na isiokwu Jenesis na-ebu naanị atụmatụ ịchọrọ; ha adighi-enwe otutu karia na zviždaljku. Nke ahụ kwuru, ha na-arụ ọrụ ha nke ọma.
Kwa Ụbọchị bụ isiokwu ọzọ nke Jenesis ị ga-elele. Site na nkwụsi ike na ọsọ nke ntọala nke Jenesis na-eji ya ma na-eji ọmarịcha ụlọ mara mma dị egwu
2. Hrana Blog Okwu
Ngosi & nkọwa / Ọnụ: 125 USD
Ngwaahịa a dị elu bụ ngwa ngwa otu n’ime echiche isiokwu blog nri WordPress. Ọ na-abịa na ndekwaa ụzọ esi eme nri ma na-enyekwa gị ohere ịnabata ntinye nri sitere n’aka ndị na-agụ gị. Nkwado ntinye nri ndị a bụ nke a na-eji Cook Cook – ngwa mgbakwunye $ 39. Ntuziaka na ndepụta nke usoro nri dị na isiokwu a na-abịa na igbe nlele, si otú a na-enyere ndị na-agụ akwụk n’aka na ha agaghị echefu ma ọ bụ ihe ọ bụla dị mkpa.
Site n’iji nke ọ bụla n’ime isiokwu ndị dị n’elu,-ga-adị njikere na blog ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ, maka blọgụ nri gị, ị nwere ike ịchọpụta na ịchọrọ ụzọ kachasị mma ma kachasị mma iji gosipụta nri gị, ma ọ bụ na ịchọrọ ime ka nri foto post gị dk mọịọ naọ postịịị na Ọrụ dị ka ndị a apụtaghị na isiokwu ahụ.
Iji nweta ọrụ dị otú ahụ, ịkwesịrị ịwụnye dodaci.
Ostavite novi blog o WordPressu i dodacima na blogu na vašem blogu:
Ntụziaka sitere na Simmer bụ ngwa mgbakwunye ọzọ na-enye gị ohere ikwuputa Ezi ntụziaka na blọọgụ gị. Ọ na-enye ntọala dị mfe iji depụta ihe ndị dị na ya, nye ntuziaka esi nri na pogledu ndị ọzọ. Nitụziaka ị gbakwunye na iji ngwa mgbakwunye a bụ ihe eji achọ injin maka enyim n’ihi na ngwa mgbakwunye a na-eji atụmatụ nhazi nke Google iji wuo ụlọ ọrọ enyi SEO.
Esi nri bụ a adịchaghị WordPress uzommeputa ngwa mgbakwunye na-abịa na a drag-na-dobe uzommeputa onye na-ewu ụlọ. Ọ na-abakwa na nhazi 10 dị njikere.
Na Ejicha ya, onye ọ bụla n’ime ndị na-agụ gị na-enweta akwụkwọ profaịlụ. Nri ya na-abịa juputara na oge, nnukwu ihe nyocha na ihe oriri na-edozi ihe gbasara Ezi ntụziaka / nri. Maka atụmatụ niile ọ na-enye, ngwa mgbakwunye bụ zuru ezu zuru ezu za $ 39.
Na mgbakwunye na dodatke ndị a, umotati dodataka ole na ole m na-akwado saịtị ọ bụla inwe. Ihe ndị a akọwapụtaghị akọwapụtaghị aha ọ bụla dị ka nke a, ma tinye uru na saịtị ọ bụla ejiri ha. Lelee ndepụta zuru ezu ebe a.
Dị mma – yabụ nke a na-elekọta logistika. ‘Više ngalaba, nnabata, na isiokwu … yana ụfọdụ dodataka nhọrọ.
N’oge a, ị dịla njikere ịmalite ịrụ ọrụ na blọgụ gị wee chọpụta isiokwu ị ga-ekpuchi, ugboro ole ị ga-ebipụta, nke usoro ntanetị mgbasa glede na ị ga-anwale bili su gabazie. Iji mee ka ihe dị mfe, gbalịa soro usoro ntinye 5 ahụ n’okpuru.
Nzọụkwụ # 1: Chee atụmatụ blog / web stranica
Chọrọ inweta nhazi blog gị nri ozugbo site na mbido n’ihi na ihe owuwu saịtị (karịchaa, isi nri ụzọ ya) ga-ekpebi etu ahụịịị igịbe ọrụ nke ndị ọrụ gị ga-esi dị.
Nke a dị mkpa maka blog nri maka ọdịnaya nke blog nwere ike ịgbatị ọtụtụ nri, nri, nri na ndị ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na inwetara nchịkọta nhọrọ nke weebụsaịtị ahụ n’aka nri, ị ga-amalit mmalite dị mma.
E wezuga ya, iche maka ihe saịtị gị ma ọ bụ naanị ime atụmatụ nchịkọta saịtị gị ga-enye gị oge iji tụgharịa uche ihe ọdịnaya gị ga-adị na ihe dị iche he ga-enyocha na blọọ.
Kate blogerica je već promijenila CookieAndKate i više nije uspjela doći do zur ezu-a. Naanị lelee otú e si akọwa ihe ndị a na-eme na otú ọfụma na-adaba adaba:
Yabụ ọ bụrụ na ị ga – enwe saịtị nwere nnukwu ọdịnaya, ị nwere ike menuga maka menu dịka nke a.
Ukwu! Mee nke a – Dịka o kwesiri, tupu ịmalite blọọgụ gị, ịkwesịrị inwe ọhụụ opekata mpe nke 20. Kedu nke pụtara, ọ bụrụ na ibipụta akwụkwọ ugboro abụọ n’izu, a ga-ekpuchi gị karịa ọnwa.
Nzọụkwụ # 3: Mepụta ịdịnaya (na-elekwasị anya na vizualima)
Akụkụ akụkụ nke ọdịnaya gị ga-abịara gị. Ekele gị nka na nišu. Otú ọ dị, omekša ga-eme ka ọkara nke ọdịnaya gị
Bụrụ ihe oyiyi nke achịcha a gwakọtara ma ọ bụ ihe ndị na-emepụta ihe, ihe oyiyi na-abụ akụkụ buru ibu nke otu blog nri. Nke pụtara na ị gaghị emeli foto foto osrednje. Ma obi dị ụtọ, we nwere ihe ndị a na-enye nri nchịkọta nri na-enweghị atụ we nwere ike ịmụta site na:
N’okpuru ihe nkiri: Fotografija hrane (jogurt parfait)
Bụrụ na ịnweghị oge ịmụ ọtụtụ ihe, ọbụlagodi bido site na ngwa ngwa a rụrụ arụ na nke ruru unyi:
Na mgbakwunye na ihe oyiyi nri, gbalịa ime ụfọdụ ihe okike dị ka nchịkọta ihe oyiyi na ntụziaka na-eji ngwaọrụ n’efu dika Canva ili Ebube azu.
Malite na akgo i ego:
Zdjela nke tọrọ ụtọ
Yabụ na nke ahụ bụ maka ịmalite blog nri na WordPress. Ọ b erụ na we nwere ego itinye ego na mmụta, lelee mmemme dịka Food Blogger Pro. Ma ọ bụ, mee ihe kachasị mma ma soro ma mụọ blọọgụ nri ndị ọzọ wee mụta ihe na ha.
Ntuziaka Editor – E ụzọ bipụtara isiokwu a na saịtị anyị nwanyị BuildThis.io. Anyị emelitela ịdịnaya ahụ tupu anyị ebidoghachi akwụkwọ ebe a.